Seminaar ku saabsan sida Dhalinyarada uga qeyb qaadan karaan Doorashada 2020-ka oo Muqdisho lagu qabtay – Hornafrik Media Network
Muqdisho (Sirta) Seminaarkan lagu baranayay Wacyi galin ku saabsan Doorka Dhalinyarada ,Haweenka iyo Dadka Laga tira Badanyahay ay ugu Qeyb qaadan karaan Arrimaha Doorashooyinka ee Dalka ka dhici doona 2020 kaasi oo ay soo qaban qaabisay Hay’adda Gargaarka iyo Horumarinta ee Sido ayaa Lagu Qabtay Magaalada Muqdisho.
Waxaa Siminaarkan ka faa’iideystay Dhalinyaro ka kala yimid qaar ka mid ah Jaamacadaha Dalka iyo Degmooyinka Gobolka Banaadir Waxaana inta Siminaarka socday Laysku Weydaarsanayay Qaabka ugu Fiican ee Bulshadu ugu qeyb Qaadan karaan Arimaha Doorashooyinka Dalka.
Qaar ka mid ah dadka ka Faa’iideystay oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in Seminaarkan ay ku barteen sida looga qeyb qaadan karo Arrimaha Doorashooyinka iyo Doorka dhalinyarada ay ku leedahay Cod bixinta Doorashada dalka ka dhici doonto.
Guddoomiyaha Hay’adda Gargaarka ee sido C/llahi Cali Jimcaale ayaa kahadlay ujeedada Seminaarka iyo ahmiyada uu u leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed.
“Waxaa loo baahanyahay in laga gudbo qaabka Qabiilka iyo nin jecleysiga ah ee lagu doorto loogana gudbo qaabka Waxqabadka ah in loo fiiriyo qof Muxuu qaban karaa, Aqoon ma u leeyahay waxa loo dooranayo, in aad la xisaabtami kartid wax qabadkiisa marka dhalinyarada waxaa looga baahanyahay in ay fahmaan Arrimahaasi isla markaana ay u gudbiyaan waxa halkan ay ka barteen dadka kale”.ayuu yiri Guddoomiye C/llahi Cali Jimcaale.
Waxaa la filayaa in markii lagaaro laba kun iyo labaatanka ay dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah taasi oo ay isku diyaarinayaan shacabka Soomaaliyeed.